I-Ultrasonic Avocado Amafutha Isizinda - Hielscher Ultrasound Technology
Isizinda se-Ultrasonic kanye nokushaywa ngendlala kukhulisa isivuno ngesikhathi sokukhiqizwa kwamafutha we-avocado.
I-Sonication iyinkqubo elula engeyona ye-thermal futhi ngaleyo ndlela ifanele ukukhiqiza ibanga eliphakeme kakhulu lamafutha we-avocado.
I ultrasonically basiza ukucindezela amafutha ngcono isivuno, kugcina izinga eliphezulu amafutha futhi ukwandisa isizinda amafutha kakhulu.
Isizinda samafutha e-Ultrasonic neMalaxation
Isizinda se-Ultrasonic yindlela eqinisiwe yokwenza amafutha aphezulu aphezulu (eg umnqumo, i-flaxseed, imbewu yamagilebhisi, i-algae, ikhukhunathi njl.) kanye nama-acterial asebenzayo (isib. ama-phytochemicals, ama-antioxidants, amavithamini, imibala njll). Ukuze kugcinwe izinga lokudla okunomsoco wezinto ezitshaliwe zezitshalo, ubuchwepheshe obuncane bokungasebenzi obubalulekile kubalulekile. Isizinda se-Ultrasonic kanye nokushaywa ngendlala kungukuthi ukwelapha okungahambi kahle, okwandisa isivuno ngenkathi kugcinwa isakhiwo se-phytochemical of the extract.
Ukucubungula kwe-ultrasonic kusiza ukucindezela okubandayo kwamafutha we-avocado ngokukhulisa isivuno samafutha. Inqubo yokucindezela engeyona-thermal iveza amafutha we-avocado agcina ukwakheka kwawo okunomsoco okwedlulele, i-aromatics egcwele i-flavored, nombala ohlaza obala obala.
Ukuxubana kwe-ultrasonic kanye nokukhipha uketshezi lwe-avocado kuthuthukisa ukukhululwa kwamafutha futhi kunganciphisa isikhathi sokuxilisa emkhiqizweni wamafutha omkhakha we-avocado ngaphandle kokuba nemiphumela emihle.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Avocado Amafutha Isizinda:
amafutha aphezulu e-avocado
ukutshalwa kwezimali okuphansi
Ngokucophelela amafutha omuthi we-avocado acindezelwe – ngokuphambene nezinqubo zokushisa okufudumele – zonke izinhlanganisela zayo ezinempilo ezinjengevithamini, ama-enzyme, ama-micronutrients, kanye ne-flavour components.
Ukukhiqizwa kwamafutha we-avocado
Ukukhiqizwa kwamafutha we-avocado kufana kakhulu nokukhiqizwa kwamafutha omnqumo. Amafutha we-avocado akhiqizwa kusuka ku-avocados e-de-pitted ne-skinneded de-skinned. Ukuze inqubo yokucindezela amafutha, kuphela inyama ye-avocado (puree noma i-pulp) isetshenziswa. Ngemuva kwalokho, inyama ivulekile emgodini we-avocado bese i-malaxed cishe. Imizuzu engu-40-60 ku-45-50 ° C.
Iprosesa ye-ultrasonic ingahlanganiswa kalula kunoma yiluphi umugqa osusa i-avocado kawoyela ukuze kuthuthukiswe ukucindezela kawoyela ukuze inani eliphakeme likawoyela elivela elilinganayo lezinto ezingavuthiwe litholakale.
Ngaphandle kokukhiqizwa kwamafutha okudliwayo aphezulu okushisa amakhaza, i-sonication ingasetshenziswa ekusetshenzisweni komgwaqo wamafutha we-avocado, isib. Ngokumisa amafutha e-avocado ngamakhi asekelwe emanzini okugqoka isaladi, amasoso noma ngisho imikhiqizo yezithokozi. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic emulsification!
Ultrasonic Avocado Amafutha Okhipha Amasistimu
I-Hielscher Ultrasonics inikeza amaprosesa we-ultrasonic kanye ne-extractors ekukhiqizeni izinga eliphezulu eliphezulu lamafutha adlayo. Izindlela ze-ultrasonic zikaHielscher zingahlanganiswa kalula emigqeni yokucindezela / yokushayisana kwamanye amafutha anesipiliyoni namadodakazi e-avocado.
Ukuhlanganiswa emgqeni wokucindezela we-avocado noma amafutha omnqumo, i-Hielscher's I-UIP2000hdT (2kW) noma I-UIP4000hdT (4kW) yizinhlelo ezikhethwe kaningi. Zifakwe ngama-sonotrodes ne-flow cell reactors ngokuhambisana nezinto ezibonakalayo ezingavuthiwe (ugwebu lwe-avocado) namandla okusebenza.
Zonke izinhlelo zethu ze-ultrasonic zakhiwe ukusebenza komhlaka 24/7 ngaphansi kwezimo ezidinga. Ukugcwalisa ibanga lezimboni, i-Hielscher`s ultrasound transducers ingafakwa ezindaweni ezinothuli kanye / noma ezinomanzi.
Hielscher Ultrasonics’ ama-processor ultrasonic ama-industriel angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes angafika ku-200μm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ku-24/7 ukusebenza. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza komsebenzi we-24/7 emsebenzini obuthakathaka nasezindaweni ezinzima.
Thintana nathi namhlanje ukuthola izinzuzo ze-ultrasonically ezisizwa ngamafutha we-avocado ukucindezela!
Ukufakwa kwe I-UIP2000hdT for isizinda
1kW kanye no-16kW izinhlelo ze-ultrasonic zezimboni zezingxenye
Isizinda se-ultrasonic (esibizwa nangokuthi sono-isizinda) yindlela eyaziwa, ethembekile yokukhipha izingxenye ezivela ezintweni eziphilayo (isib. Amafutha, Amafutha abalulekile, ama-aromatics, ama-antioxidants, ama-nutrients). I-cavitation ekhiqizwa nge-ultrasonically i-perforates noma iphula ubude beseli ukuze into ye-intracellular – isib izinhlanganisela ezibalulekile njengamafutha, ukunambitheka, amavithamini, imibala – ikhishwa. Isizinda se-ultrasonic yindlela ephumelela kakhulu futhi ephumelelayo futhi isetshenziselwa kakhulu ukukhishwa ekukhiqizeni kwezolimo kanye nezinto ezisebenzayo ezivela ezitshalweni zezitshalo (isib. Izithelo, amakhambi, amantongomane, imbewu, amaqabunga) ekukhiqizeni izitshalo eziphakeme kakhulu zezitshalo zemithi, nutraceutical, izimonyo, kanye nomkhakha wokudla.
Ukukhiqizwa kwamafutha we-avocado kufana kakhulu nokukhiqizwa kwamafutha omnqumo. Ukuze uthole amafutha we-avocado, ama-avocados avuthiwe ahlutshiwe futhi itshe (imbewu) lisusiwe. Ngemuva kwalokho, inyama ivulekile emgodini we-avocado bese i-malaxed cishe. Imizuzu engu-40-60 ku-45-50 ° C.
Amafutha engeziwe we-Virgin Avocado
Njengamafutha omnqumo ehlukile, amafutha omuthi we-avocado aphefumulanga angagcini futhi kanjalo agcina izici zokugcoba nombala wenyama yezithelo.
Amafutha we-avocado ahlanganisiwe ngokuphathelene nekhwalithi yawo: Ngaphandle kwamanye amafutha we-avocado amancane, amanye amamaki afana namafutha ashukela e-avocado, amafutha ehlanzekile (= ahlanjululwe) ama-avocado kanye nama-blend ayatholakala. Wonke ama-avocado, angewona amantombazane amaningi, avame ukukhishwa emazingeni okushisa aphakeme. Kulawa mafutha okugcina, izinyathelo ezengeziwe zokwenza izinqubo kanye / noma izixazululo zamakhemikhali zisetshenziselwa ukuthola amafutha kusuka ku-avocade.
Inqubo yokuhlanza amafutha yemifino ithonya iphuzu lokubhema komusi, ishalofu-impilo & ukuzinza, umbala, ukunambitheka, i-asidi kanye nokwakheka (iphrofayli yezokudla). Phakathi nenqubo yokuhlanza, ama-waxes wemvelo aqothulwe emafutheni we-avocado. Lokhu kuholela endaweni ephakeme yokubhema. I-ovocado oyela iphuzu eliphakeme lokubhema: I-smoke iphunga lamafutha angenalutho lingama-480 ° F (249 ° C) futhi ifomu elihlanziwe lingamelana namazinga okushisa angafika ku-520 ° F (271 ° C). Iphuzu eliqondile lokubhema lixhomeke kwikhwalithi yokuhlanzwa kwamafutha kanye nokusingatha amafutha nokugcina ngaphambi kokuba kusetshenziswe.
Amafutha we-avocado asebenza kahle njengamafutha othwala amanye ama-flavour. Iphezulu emafutheni ase-monounsaturated ne-vitamin E. I-ovocado oyelayo ibuye ithuthukise ukumuncwa kwe-carotenoids nezinye izakhi.
Amafutha omuthi we-avocado amancane yilo kuphela ibanga lamafutha we-avocado aqukethe inani elibalulekile le-vitamin e-antioxidant. Ngaphezu kwalokho, amanye ama-phytochemicals nama-polyphenol azuzisayo agcinwa ukushisa okubandayo okubangelwa amafutha aphezulu.
I-avocado (eyaziwa nangokuthi i-alligator pear) isho izithelo, ezikhula esihlahleni se-avocado (Persea americana). Ngokwe-botanically, izithelo ze-avocado zihlukaniswa njengebhhero enkulu equkethe imbewu eyodwa enkulu.
Kunezinhlobo ezahlukene ze-avocasi emakethe. I-'Hass’ yi-cultivar evamile kakhulu ye-avocado. Iveza izithelo unyaka wonke futhi inikeza cishe. I-80% yama-avocade ahlonyelwe emakethe yomhlaba.
Amanye ama-cultivars e-avocado ajwayelekile ayaziwa ngokuthi u-Choquette, uLula, Gwen, Maluma, i-Lamb Hass, i-Pinkerton, iReed, i-Fuerte, i-Sharwil, i-Zutano, i-Bacon, i-Ettinger, i-Sir Prize, ne-Walter Hole.
I-avovoc ngokuvamile ibizwa ngokuthi yi-superfood ngoba inikeza amafutha amaningi enempilo, amavithamini nama-micronutrients.
Ukuba isithelo, ama-avocade anokuqukethwe okunamafutha aphezulu kakhulu: 71 kuya ku-88% wekhalori labo eliphelele livela kokuqukethwe kwamafutha e-avocado. Kodwa-ke, i-avocado iyaziwa ngokwakhiwa kwayo kwamafutha enempilo, okuqukethe amaphesenti angama-71% e-monounsaturated fatty acids (MUFA), ama-13% we-polyunsaturated fatty acids (i-PUFA), nama-acids angu-16% agcwele ama-acids (SFA), okusiza ukugqugquzela i-lipid yegazi ephilile amaphrofayili kanye nokuthuthukisa ukutholakala kwamavithamini amafutha anelisayo nama phytochemicals avela ku-avocado noma ezinye izithelo nemifino, ngokwemvelo kunamafutha, adliwa nama-avocade. (Dreher et al. 2013)
Ama-avovoc aphezulu e-pantothenic acid, i-fiber yokudla, i-vitamin K, ithusi, i-folate, i-vitamin B6, i-potassium, i-vitamin E (α-tocopherol), i-vitamin C, i-carotene ne-lycopene. Zingokwemvelo zikhululekile kwi-sodium, ushukela ne-cholesterol.